४८ वटा ‘नेपाल’जत्रो संसारकै विशाल जंगल, जहाँ उम्लिरहेको नदी छ ! – Waikhari
गृहपृष्ठ Featured ४८ वटा ‘नेपाल’जत्रो संसारकै विशाल जंगल, जहाँ उम्लिरहेको नदी छ !
४८ वटा ‘नेपाल’जत्रो संसारकै विशाल जंगल, जहाँ उम्लिरहेको नदी छ !
१. विश्वको सबभन्दा ठूलो याे जङ्गलको अधिकांश क्षेत्रफल ब्राजिलको भूभागमा पर्छ । ७० लाख वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमध्ये ६० प्रतिशत ब्राजिलको भूभागमा छ । यो दक्षिण अमेरिकाका ९ वटा देशमा फैलिएको छ । दक्षिण अमेरिकी मुलुक पेरुमा १३ प्रतिशत, कोलम्बियामा १० प्रतिशत र अरू बाँकी जङ्गल भेनेजुएला, इक्वेडोर, बोलिभिया, गुयना, सुरिनाम र फ्रेन्च गुयनाको भूभागमा पर्छ ।
६. पानीको बहाबका हिसाबले संसारको सबभन्दा ठूलो अमेजोन नदी पनि यहीँ पर्छ । यस नदीको बहाब करिब २ लाख ९ हजार घनमिटर प्रतिसेकेण्ड रहेको छ ।
यस नदीमा ३ हजारभन्दा बढी माछाका प्रजाति रहने वैज्ञानिकहरूको भनाइ छ । यो नदी पौडिएर पार गर्न करिब ६६ दिन लाग्ने बताइएको छ । सन् २००७ मा मार्टिन स्ट्रेल नाम गरेका एक व्यक्तिले पौडिएर नदी पार गरेका थिए । उनी हरेक दिन १० घण्टाका दरले पौडिएर ६६ दिनमा नदी पार गरेका थिए ।